UDAISY RIDLEY KWAKHONA WAYENGAZI MALUNGA NOREY PALPATINE - DAISY RIDLEY
Ukuqwalaselwa Kobukumkani E-Edinburgh
UDaisy Ridley Kwakhona wayengazi malunga noRey Palpatine
Kubonakala ngathi uRey Palpatine yayingeyonto uDaisy Ridley awayeyazi kwasekuqaleni.
Kudliwanondlebe lwe Isiphithiphithi Ukuhamba , USariah Wilson wazisa kuRidley indlela awayemthanda ngayo uRey Akukho mntu, kwaye uRidley watyhila ukuba wayengazi malunga nomxholo webali likaPalpatine de Ukunyuka kweSkywalker yeza, nantsi ingxaki: Oko kuyacaca kwiscreen.
Ndixelele uDaisy Ridley indlela endandimthanda ngayo 'uRey Nobody,' ukuba uRey wayenamandla nje yedwa kwaye wayedakumbile xa bemenza iPalpatine. UDaisy uthe uyamthanda nokuba uRey uvela ndawo kwaye nakwiifilimu ezimbini zokuqala, uWilson ubhale i-tweeted. 'Ndixelelwe ngokoqobo ukuba wayengenguye, ke ewe, ndiyayiqonda ngokupheleleyo loo nto. Ndiyayiqonda loo nto. ’Ndacela uxolo kwakhona ngokuzisa [ii-Star Wars], kwaye wancuma wathi kum,‘ Konke kulungile! ’
Ndiyalicaphukela ibali lePalpatine ngenxa yezizathu ezininzi, esinye sazo sesokuba waziva njengomlawuli uJJ. UAbrams wayefuna nje ukudlala nomnye wabakhohlakeleyo abathandayo kwaye wagqiba kwelokuba amphose nje njengoyisemkhulu kaRey ukuze enze njalo. Kwaye ngokuqinisekileyo, umdlali weqonga ongazi ukuba iarc yomlinganiswa uza kuphuma ayisiyonto intsha, kodwa ye Idabi leenkwenkwezi , kubonakala ngathi kuyacaca ukuba uqhagamshelo lwePalpatine lwalungekho kwi-radar yakhe nabani na de Ukunyuka kweSkywalker .
Ukunyuka kweSkywalker Umboniso bhanyabhanya ongalunganga. Kulungile. Kulungile Idabi leenkwenkwezi Umboniso bhanyabhanya sisiphelo esidanisayo kuthotho lweefilimu ezintle. Senditshilo kwaye ndiza kuphinda nditsho, Ukunyuka kweSkywalker ibingaphezulu komlinganiso wee-prequels kwaye ndaziva ndiphume ngokulandelelana kunye nobungakanani be-sequel trilogy.
Okwangoku, ibali lebali likaRey Palpatine likho, kwaye ngokuqinisekileyo, bekukho iingcinga ngaphambi kwebhanyabhanya ukuba uza kudityaniswa neChancellor, kodwa iingcinga eziphambili zajikeleza u-Obi-Wan Kenobi engutatomkhulu wakhe endaweni yoko.
Kodwa konke oku akubalulekanga ngokwenene. Yintoni ebalulekileyo kukuba bangaphi abantu ababambelele kumbono wokuba nguRey Akukho mntu. Ixesha elide, i Idabi leenkwenkwezi Indalo iphela yarhangqwa ngumdlalo weeSkywalkers. Babengamaqhawe ethu kwaye abo sasifuna ukugxila kwixesha lethu namandla ethu, ke umbono wokuba uRey ngekhe abe mntu wawunomtsalane.
Endaweni yokuba unxibelelane IPalpatine kubo bonke abantu, kwaye kuvakala ngathi kukuhlaba entliziyweni yabo babecinga ukuba akunyanzelekanga ukuba aphinde adityaniswe nendoda eyoyikisa umnyele amashumi eminyaka.
Into endiyithandayo ngale nto ityhila nangona kunjalo kukuba uWilson waxolisa ngokuzisa Idabi leenkwenkwezi , Kwaye uDaisy Ridley akazange abonakale engakhathali. Uhlala ezisa ilungelo lokuthengisa kwaye ndiyakonwabela ukumbona amkela abo basafuna ukubuza malunga noRey kunye nekamva lakhe kwi Idabi leenkwenkwezi iphela.
steven iphela ukusuka emilenzeni ukuya kwilizwe lasekhaya
Ndiyamthanda uRey, nokuba andenzanga njalo uthando ibali lakhe kwi Ukunyuka kweSkywalker , Kwaye ndiyathemba ukuba siyakufumana okungakumbi ngaye ngenye imini.
Amarhamncwa Amnandi Ulwaphulo-Mthetho Lokugaya
Ilivo Lezelda Twilight Princess
Uhelena Bonham Carter
margot robbie ghost kwiqokobhe
Bukela i-alchemist epheleleyo ye-alchemist ye-action action movie
wenza njani abanye abantwana
khusela ilungelo lakho lokuthetha
izinto zasemzini d & d iiklasi
U-zaheer ubulala umhlaba ukumkanikazi